Kitra Afrikanina : hilalao any Vontovorona ny Cnaps Sport | NewsMada
Kitra Afrikanina : hilalao any Vontovorona ny Cnaps Sport
Hifamadika fa tsy toy ny tamin’ny taon-dasa ny fotoana hiatrehan’ireo ekipa malagasy roa hiatrika ny fifaninanana afrikanina, eo amin’ny taranja baolina kitra. Handray ny lalao savaranonando mandroso eo amin’ny fiadiana ny tompondaka ny Cnaps Sport eny amin’ny kianja Vontovorona ny asabotsy 11 febroary izao. Efa any an-toerana manao fanazarantena ny ekipan’ny Cnaps Sport hatramin’ny fiandohan’ny taona teo.
Ny alahady 12 febroary kosa ny an’ny Elgeco Plus eo amin’ny fiadiana ny amboaran’ny kaonfederasiona. Tsy mbola voafaritra kosa na ho any Vontovorona na etsy amin’ny kianjaben’ny Mahamasina, ny hanatanterahana ny lalaon’ity ekipa ity.
Ankoatra izany, hitantana ny fihaonana eo amin’ny ASPL 2000 Maorisy sy ny Tusker FC Kenya, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika ireo mpitsara Malagasy efatra, ahitana an’i Andofetra, Hasinjarasoa Lionel, Ravonirina ary Abdoul Kanoso. Hatao ao amin’ny kianja Georges V Curepipe, ny alahady 19 febroary izany lalao izany.
Hitsara ny fihaonana eo amin’ny ST Michel United avy any Seisela sy Al Hilal Elobied avy any Soudan, ny alahady 19 febroary ihany, ao amin’ny kianja Linite Victoria, eo amin’ny fiadiana ny amboaran’ny kaonfederasiona i Andriamiharisoa Bruno, Herinirina Gabriel, Rambeloson Alain, Nampiandraza Hamada.
Ankoatra izany, ho “commissaire au match”, amin’ny lalaon’ny Zanako FC Zambia sy APR FC Roandà, ny filoha lefitry ny federasiona, Andriamiasasoa Doda.